Muuri News Network » XOG: Maxaa ka soo baxay shirkii Hotel Jasiira & Beesha Biimaal oo isku raacday Suldaanka saxda ah.
XOG: Maxaa ka soo baxay shirkii Hotel Jasiira & Beesha Biimaal oo isku raacday Suldaanka saxda ah.
Jun 21, 2016 - Comments off
Waxaa si nabad ah maanta Magaalada Muqdisha ugu soo gebagaboobay shir ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta iyo Odayaasha Beesha Biimaal,
Shirkaas oo la isaga horkeenay kooxo qaswadayaal ah oo ka soo horjeeda jiritaanka hogaanka Dhaqanka saxda ah ee Beesha Biimaal iyo Suldaan Ibraahim Suldaan Cali Xaaji, Nabadoon Awyare Abshiroow iyo Ugaaska Beesha Biimaal Ugaas Axmed Siid Cali oo ah Odayaasha ay ka go.do talada Beesha Biimaal.
Kullanka ayaa waxaa dhexdhaxaadinayay sadex xubin oo ka soo jeedda beesha Biimaal ee jubbaland islamarkaana kismaayo kasoo raacay Axmadeey Maxamed Cali iyo Asxaabtiisa; waxa ayna kala ahaayeen, Nabadoon Aadanoow Maxamed Aadan, xildhibaan xuseen yare ( Jubbaland) iyo col. Xujaale oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland.
Shirka oo qaatay saacado ayaa looga dooday arimo badan oo ay ka mid ahaayeen cidda Beesha Biimaal ku matali doonta 135-ta oday dhaqameed oo dhawaan la filayo in lagu ansixiyo shirka shirka madasha ee Beydhaba.
Dood dheer kadib siyaasiyiinta iyo odayaasha Beesha ayaa soo jeediyay in lagamamaarmaan ay tahay danta Beeaha Biimaalna ay Ku jirto in uu Suldaan Ibraahim Suldaan Cali Xaaji uu hormuud ka noqdo xulitaanka xildhibaanada Beesha Biimaal ee sanadka 2016-ka.
Intaa kadib ayaa waxa ay odayaasha iyo siyaasiyiinta isku raaceen in suldaanimada ay ka dhaxeeeyso Beesha daadoow, isla markaana uu buuqa badanayo hadii beelaha kale ay faragelin ku yeeshaan cidda noqoneysa suldaanka saxda ee beesha Daadoow.
Ugu danbeyntii waxaa Beesha daadoow loo xilsaaray in ay keenaan suldaanka saxda ah ee beesha Biimaal, lafaha kalana ay faragelinta ka daayaan.
Waxaa sidoo kale odayaasha beesha Daadoow dhexdooda isku raaceen oo ay lama taabtaan ka dhigeen in Suldaan Ibraahim Suldaan Cali Xaaji uu yahay Suldaanka Beesha Biimaal ee soo xulaya xildhibaanada 2016
Cid kalana aan lagu amini karin masiirka Beesha Biimaal maadaama uu Suldaan Ibraahim Suldaan cali Uleeyahay qibrad buuxda sida loo soo dhiciyo xaqqa Beesha Biimaal.